Ndị ọrụ Selo Group na Chef Meyrick a ma ama ịzụlite ahụmịhe nri
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Ndị ọrụ Selo Group na Chef Meyrick a ma ama ịzụlite ahụmịhe nri
culinary • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọrụ Selo Group na Chef Will Meyrick
Selo Group, ụlọ ọrụ mmepe na-emeri na nturu ugo zuru oke nke dabere na Singapore, kwupụtara ọkwa onye isi nri mba ụwa na onye ama ama Will Meyrick dị ka onye mmekọ ọhụrụ.
Onye isi nri ga -azụlite ahụmịhe nri ọhụrụ maka ọrụ ụlọ Selo.
Meyrick aghọọla aha ezinụlọ na Indonesia nwere ụlọ nri asaa na -aga nke ọma n'okpuru eriri ya.
Selong Selo Resort & Residences, nke mepere n'ụsọ osimiri mara mma nke South Lombok na Indonesia na 2016, ga -abụ onye mbụ ga -ahụ ihe oriri Meyrick.
Meyrick ga-eweta akụ na ụba ya iji zụlite ahụmịhe nri ọhụrụ na ilekọta mmemme nri na ihe ọ beụ inụ maka ọrụ ụlọ Selo, gụnyere ihe nrite mmeri ya na-emeri. Selong Selo Resort & ebe obibi dị na Lombok, Indonesia.
Andrew Corkery kwuru, "Will ga -amata nke ọma n'ahịa Indoneshia ma bụrụkwa onye ọchụnta ego na -aga nke ọma ebe ahụ ihe karịrị afọ 25 dị ka onye nwe ọtụtụ ụlọ nri na Bali, yabụ na ọ bụ nwa akwụkwọ zuru oke ga -ebute mbọ esi nri maka ọrụ anyị." Otu SeloCEO. "Anyị maara na ndị ọbịa anyị ga -anụ ụtọ ihe okike ya, ihe ọmụma sara mbara na oke agụụ maka njem na njikọ site na nri."
Onye ọsụ ụzọ nke mpaghara nri, Meyrick ewulitela aha ya n'ịkwalite ókè. Ọrụ ya butere ya site na London ruo Sydney na n'ikpeazụ gaa na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ebe ọ nọ ugbu a. Mgbe ọ rụchara ọrụ n'ụlọ nri abụọ dị na Sydney, Meyrick gara Indonesia, Thailand na Hong Kong maka ohere ọhụrụ wee hụ obere agwaetiti Bali n'anya, ebe o guzobere alaeze ebe nri ya, Sarong Group.
Ọ ghọọla aha ezinụlọ na Indonesia nwere ụlọ nri asaa na-aga nke ọma n'okpuru eriri ya, gụnyere Sarong, Mama San, Hujan Locale na Ubud, Billy Ho Izakaya Japanese na Canggu, na Monsoon na Central, Hong Kong. Na mgbakwunye na Pọtụfoliyo nke ụlọ nri na akwụkwọ nri, enwere ike ịhụ Meyrick na ọrụ na -aga n'ihu na mmemme TV mba na nke mba dị ka franchise Top Chef na azụ na azụ n'okporo ụzọ na ọwa nri Asia, yana YouTube ya na usoro ọwa nchọpụta.
Selong Selo Resort & Residences, nke mepere n'ụsọ osimiri mara mma nke South Lombok na Indonesia na 2016, ga -abụ onye mbụ ga -ahụ ihe oriri Meyrick. Ngwongwo ahụ bụ njem nkeji iri abụọ na ise site na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Lombok ma na-enye ihe karịrị ụlọ ezumike 25 nke nwere otu ụlọ ruo asaa, ụlọ ezumike zuru oke, ụlọ klọb, Aura Bar & Lounge, klọb ụmụaka, na ịnweta klọb osimiri. N'akụkụ ebe a na-eme njem bụ ụlọ ezumike nkịta 50 pụrụ iche maka ịre ahịa na studio, nhọrọ ime ụlọ abụọ ma ọ bụ abụọ nwere ọdọ mmiri mikpuru onwe.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Selo Group na ọrụ ya, biko gaa www.selogroup.co
Banyere Selo Group
Selo Group nwere ndekọ egwu egosipụtara maka ịdị mma ụlọ, ebe ntụrụndụ okomoko na villa ndị meriri na oge na mmefu ego, ruo ọkwa mba ụwa niile. A na -ewu ụdị azụmaahịa ahụ maka nnweta, mmepe na ịrụ ọrụ. Ndị otu mba ụwa nwere ahụmịhe na -ahụ maka imewe, ịre ahịa na ịre ahịa, ihe owuwu, na ọrụ ụlọ oriri na ọ resortụ resortụ. Ndị otu Selo na -enye nnukwu mmepe, owuwu, arụmọrụ na ọrụ njikwa, na -ahụ maka ọrụ site na mmalite ruo na njedebe siri ike na nkwado. Site na njikọta kwụ ọtọ, otu a na -ejide arụmọrụ dị n'ime imewe, ahịa na vetikal na -ewu ebe ntụrụndụ. Teknụzụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na imewe nke Selo na -egosipụta ntinye aka na ụkpụrụ nkwado na ụzọ owuwu ya, arụmọrụ ya, yana itinye aka na ndị obodo na gburugburu eke.